The Fight For ရန်ကုန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » The Fight For ရန်ကုန်
The Fight For ရန်ကုန်
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Feb 12, 2015 in Myanma News, Opinions & Discussion | 11 comments
ပထမ တဆင့်တော့ အောင်မြင်သွားပြီ ကျောင်းသားရဲဘော်တို့… ဒါပေမည့် စစ်တပိုင်းအစိုးမရ နည်းဗျူ ဟာပိုင်း အလျှော့ပေးတာလို့ မြင်တယ်။ ဥပဒေ မပြင်ဘဲ တင်းခံထားရင် တောင်းဆိုမှုတွေ ဖြစ်မည်ဆိုတာ တွက်ထားပြီး မျှော်လင့်တာထက် အင်အားပိုကြီးနေလို့ တကွက်လျှော့ပေးတာ ဖြစ်မည်။ သမိုင်းကို သင်ခန်းစာယူကြ.. စစ်အစိုးရ အစဉ်ဆက် ဘောင်းဘီဝတ် ဘောင်းဘီချွတ် တဂေါင်မှ မယုံရ…။ စေတနာ ရှိသူ တဦးစ နှစ်ဦးစ ရှိလည်း မူဝါဒပိုင်း အဆုံးအဖြတ် မပေးနိုင်။ အဲဒါကို မမေ့နဲ့.. နိုိ့မို့လျင် ပုဂ္ဂိုလ်ခင်လို့ တရားမင်.. တဖက်က လူရိုသေ ရှင်ရိုသေမို့ ကျလောက်အောင်ပြောနိုင်လို နားယောင်ပြီး ရေတိမ်နစ် ဆုံးပါးတတ်တယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ မယုံနဲ့.. ဒီအခြေအနေအထိ မင်းတို့ဖာသာ ရုန်းကန် လှုပ်ရှားလာခဲ့တာ။ ရင့်ကြက်တန်သလောက် ရင့်ကြက်နေပြီ၊ အတွေ့အကြုံကောင်းတွေလဲ ဘဝနဲ့ချီပြီး ရနေကြပြီ။ အခု လိုက်လျောနေတဲ့ စစ်တပိုင်းအစိုးမရ မင်းတို့နောက် လူထုမရှိ၊ ကျောင်းသားမပါလျင် ဘယ်လို တုံ့ပြန်မည် ထင်သလဲ၊ ဘယ်လို ဆက်ဆံမည် ထင်သလဲ။ ရိုက်မယ် နှက်မယ်၊ ထောင်ချမယ်၊ သပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ကြမ်းပိုးသူခိုး ပြည့်တန်ဆာလောက်ဖြစ်အောင် ဝါဒဖြန့် နှိပ်ကွပ်မှာ။ အပြုံးနောက်ကွယ်က ရက်စက်မှုကို သတိရကြ။ ပြောနေတာ ကြောက်ဖို့ မုန်းဖို့ လက်စားချေဖို့ မဟုတ်ဖူး။ မိမိတောင်းဆိုချက် ရပ်တည်မှုကို အယိုင်အလဲ မခံဖို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားဖို့ ပြောတာ။
လူထုကို သေချာရှင်းပြ၊ လမ်းခရီးမှာ ဒေသအာဏာပိုင်များရဲ ကောက်ကျစ်မှုတွေ၊ အပြောတမျိုး အလုပ်တမျိုး ဖြစ်ရပ်တွေ…။
ဖွတ်အစိုးမရဖက်က ဗျူ ဟာပြောင်းတော့ ကျောင်းသားထုဖက်ကလည်း လိုက်လျောညီထွေ ပြောင်းလို့ရတယ်။ ဘယ်လိုပြောင်းမည်လဲ.. တောင်းဆိုချက်တွေ မဖောက်ဖျက်ဖို့၊ လျာထားချက် ပြည့်မှီဖို့ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု၊ သေချာရေရာ လက်တွေ့ဆန်တဲ့ အာမခံချက် ရဖို့ တိုက်ပွဲလမ်းချောင်းပြောင်းသင့်ပြောင်း။ သတင်းထောက် ကိုပါကြီးသေတာလို့ အထောက်အထားရှိလည်း စစ်တပ်က ဗျောင်လိမ်တယ် မဟုတ်လား။ သူတို့တပ်တွင်း ပေးမစစ်နိုင်ဘူး နောက်ပိုင်း ငြင်းတော့ ဘာတတ်နိုင်သလဲ။ လွှတ်တော် တခုလုံးတောင် အယင်ရေးပြီးသား ဥပဒေမူကြမ်းကို ပြောင်းပြီး ဘပြောင်ခိုင်းတဲ့ ဝှိုက်ကတ်မဲပေးခွင့် အတည်ပြုလိုက်တယ် မဟုတ်လား။ ရက်ပိုင်းအကြာ အခု လုပ်ပြန်ပြီ.. ဝှိုက်ကတ်တွေ သိမ်းတော့မည်တဲ့။ လွှတ်တော် ထဲက ဘွားဒေါ်လည်း အားမကိုးနဲ့.. သူ့ဟာသူတောင် ဘာလုပ်လို့ လုပ်နေမှန်း သိပုံမရ။
ကျောင်းသား သမဂ္ဂတည်ရှိမှု အရေးကြီးတယ်။ သမဂ္ဂနဲ့သာလျင် အမျုိးသားပညာရေး ပြောင်းလဲမှု၊ တိုးတက်မှုကို စောင့်ကြည့်ပေးနိုင်မည်။ ကျောင်းသား အရေး ကျောင်းသားပဲ လုပ်ရမှာကိုး။ အင်အား မရှိလျင် ဖွတ်အစိုးမရ ဂရုမစိုက်ဆိုတာ ခု ကျောင်းသား သပိတ်က ပြနေတယ်။ အလုပ်သမားတွေ ဆန္ဒ ပြလိုက်တာ.. အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခ နည်းဥပဒေ ထွက်မလာ..။ ဘွားဒေါ် လက်နက်ချပြီး လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးဝင်လည်း ဘာမှမထူး။ တကယ်လုပ်မှန်းသိ လုပ်ပြနိုင်စွမ်းရှိသူမှ ဒင်းတို့ကြောက်တယ်။ သမဂ္ဂရပ်တည်မှု အားကောင်းလာလျင် ပြည်သူလူထု ထောက်ခံအားပေးမှု ပိုမြင့်လာမည်။ ခုတောင် ငါ့အသိ ပန်းသေးတရုတ်ကြီးတယောက်က သမဂ္ဂအဆောက်အအုံ ဆောက်ဖို့ဆို သူဦးဆောင် လှူ မည်တဲ့။ သမဂ္ဂအဆောက်အအုံ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး၊ အစိုးရမှ လေးလေးစားစား အသိအမှတ်ပြုရေး၊ သမဂ္ဂကွပ်ကဲမှုနဲ့ ပညာရေးဥပဒေကို တွဲဖက်စောင့်ကြည့်ရေးတို့ဟာ တိုက်ပွဲဗျူ ဟာအသစ်တွက် လုံလောက်တယ်။
ရန်ကုန်ကို ချီတက်ကြ၊ ရန်ကုန်မြို့ကို သိမ်းကြ။ တတိယမြန်တျန့်နိုင်ငံကို တည်ထောင်သူ အလောင်းဘုရားမင်းကြီး ရန်ကုန်မြို့ဝင် အောင်မြေနင်းသလို ကျောင်းသားတပ်လည်း ရန်ကုန်မြို့ဝင် အောင်လံထူကြ၊ ခွပ်ဒေါင်းတံဆိပ် အောင်လံထူကြ။ ရန်ကုန်ထဲ စုပြုံဝင်တာထက် လက်ရှိပုံစံ အခြားစစ်ကြောင်းတွေ အရင်ဝင်ပစေ..။ ပင်မစစ်ကြောင်း နောက်မှလိုက်… အဲဒီအခါ စစ်တပ်သစ္စာခံ ဖွတ်၊လူမိုက်နဲ့လုံထိန်းရဲတွေ အင်အားမမျှ ထိန်းရခက်ကုန်လိမ့်မည်။ ကိုယ့်ဖက်ကလည်း သူတို့ တုံ့ပြန်မှုကို စောင့်ကြည့်ခွင့်ရမည်။ ကိုယ့်အလှည့်ကြမှ ဝင်မရတော့လည်း အတွင်းအပြင် ညှပ်တိုက်ပြီးသား ဖြစ်မယ်။ ထောက်ပံ့ရေး လမ်းကြောင်းတော့ သေချာပစေ။ ရေရှည်တိုက်ပွဲအတွက် ရိက္ခာ၊ရေ၊ဆေးဝါး၊ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း အရေးကြီးသည်။
စစ်ကောင်တွေကို မညှာနဲ့ အားမနာနဲ့နော်။ အထူးသဖြင့် တောင်းဆိုချိန်မှာ လုံးဝ အလျော့မပေးရဘူး၊ ဆွေးနွေးလို့ လက်တွေ့ဖြစ်မြောက်ရန် နီးစပ်ပြီဆိုမှ လျော့တန်တာလျော့..။ လူထုပါဝင်မှုကို ဒင်းတို့ မျက်လုံးဒေါက်ထောက် ကြည့်နေတယ်.. လူထု အားပေးမှု ကျသွားချိန်ဟာ ဒင်းတို့ အကြမ်းဖက်မည့် အချိန်ပဲ။ ပထမဆုံး နေပြည်တော်ခေါ် အယောင်ပြ ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ပြတယ်.. အကယ်၍ လူထုသာ ဝေဝါးသွားလျင် ကျောင်းသား အုပ်စုကွဲလျင် ဒီနေ့ဒီအချိန် သပိတ်ခေါင်းဆောင်များ ထောင်ထဲရောက်ပြီ။ ထင်သလို မဖြစ်တော့ နောက်တပွဲ လုပ်ပြရပြီ။ နောက်ပိုင်း လူထု တုံ့ပြန်မှုသည် တိုက်ပွဲ အဆုံးအဖြတ်ပဲ…။ ရန်ကုန်ကို သိမ်းကြ.. အောင်ပွဲ အရယူကြ ခွပ်ဒေါင်း ရဲဘော်တို့…။
အောင်ပွဲဆိုတာ အနိုင်ယူရဲသူများ အတွက်သာ…
ရန်ကုန်ကို ချီတက်ကြ၊ ရန်ကုန်မြို့ကို သိမ်းကြ။
ဟဲဟဲ… သိမ်းလို့ရတော့ရော.. .ဘာတွေဆက်လုပ်မှာလဲ….
စစ်ကောင်တွေကို မညှာနဲ့ အားမနာနဲ့နော်။
ကျောင်းသား မိဘပြည်သူတွေကို… အားနာမယ်..ညှာတာမယ်မထင်…
အရင်းအနှီးကြီးကြီး(တော်တော့်ကို မတန်တဆကြီးကြီးတွေ) ပေးကိုပေးရမှ….
တောကြောင်တွေ လက်ခမောင်းခပ်ဖို့ စောင့်နေတယ်။
အခု ကျောင်းသား တွေ နောက်မှာ လူထုကြီး ဆိုတာ အင်တာနက် လေထဲ က အော်နေတာ။
တကယ်လဲ လူထုရော၊ တစ်ခြား ကျောင်းသား တွေပါ အင် နဲ့ အား နဲ့ မပါ လို့ ဒီ အစိုး ရ နဲ့ ရောပြီး နည်းပြောင်းဖို့ ကြိုးစား နေတာ။
လက်ရှိ ကျောင်းသား ဆိုတာ တွေ ထဲ ဘုန်းကြီး များရော၊ ကျောင်းသား အဖေ ဦးလေး တွေ က များ နေသလားလို့။
လူချင်းတော့ ခင် ပါတယ်။
မူ ချင်း ကွဲ တာ မို့ ဒီအချိန် တစ်ဖက် ဘဲ နင်း ရမယ် ဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘက် ကို ဘဲ ယုံပြီး နင်းပါမယ်။
၂၀၁၅ အလွန် မှာ အိမ်မက် ဖြစ်မလာ ရင်လေ
. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ခေါ်ထုတ်ပြီး နိုင်ငံသစ် ထူထောင်မယ်။
အဲဒီနိုင်ငံ ကလေ မမြင်မတူ လဲ ရင်ကြားစေ့ စကားပြောတတ်သူ တွေ အတွက်ပေါ့။
. ရွှေပြည်ကြီး ထဲ ငါမှန်တယ် ဘယ်တော့မှ မလျှော့ ဆိုသူများ ခေါင်းချင်း ဆိုင်ပြီး နေခဲ့ပေတော့။
အရင်စကတည်းက.. တောင်းဆိုချက်တွေ(၁၁ချက်)ထဲ.. ပိုလက်တစ်မပါ.. ကျောင်းသားရေး..ပညာရေးဖြစ်နေတာကို… ကကြောင်ကြီးဘာတွေထ,လက်ခမောင်းခတ်သလည်းမသိ..။
ရန်ကုန်ဝင်ရင်.. အရင်ကလို.. လမ်းတွေပိတ်..အစိုးရယန္တယားထိခိုက်မယ်မဟုတ်..။
သိရက် နဲ့နောက်ကွယ် မှာ ဘာရှိ တယ် ဆိုတာ မသိချင် ဟန် ဆောင်မနေပါနဲ့။
ကျွန်မ အမြင်မတော့ ဒါဟာ မရိုးသား တဲ့ က ကွက်ဘဲ။
နေပြည်တော် ၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၁ရက်၂၀၁၅
အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားများနှင့် နှင်းဆီစံအိမ်တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေမူကြမ်းကို သပိတ်မှောက်နေသော ကျောင်းသား၊ကျောင်သူများနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ ပါတယ်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များဘက်က သပိတ်မှောက်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေတွေ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေမူကြမ်းပေါ်မှာ သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားများရဲ့သဘောထားတွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ် အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌမှလည်း ကျောင်း သားများတင်ပြလာတဲ့ လိုလားချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေမူကြမ်း အကောင်း ဆုံးဖြစ်အောင် ဘယ်လိုဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမလဲ ဆိုတာကို ကျောင်းသားများရဲ့သဘောထားကို မေးမြန်းခဲ့ပြီး သပိတ်မှောက်ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေအနေနဲ့က လိုအပ် နေတဲ့ အကူညီတွေရှိတယ် အဓိက ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကူပေးဖို့အတွက် တင်ပြခဲ့ပါတယ် အဆိုပါတွေ့ဆုံမှုမှာ နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ်မှ စတင်တွေ့ဆုံပြီး မွန်းတည့် ၁၂နာရီ ၁၅ မိနစ်ထိကြာမြင့်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲသို့ သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားများဘက်မှ ကိုကျော်သက် တတိယနှစ် IT (ပုသိမ်နည်းပညာတက္ကသိုလ်)၊မအိမွန်
ပိုပို စတ္ထုနှစ် English (ပုသိမ်)၊ ကိုဇေယာလွင် တတိယနှစ် B.Dev.S ( Eco) ရန်ကုန်စီးပွါးရေးတက္ကသိုလ်၊ ကိုရဲဇာနည်ထွန်း ဒုတိယနှစ် CT ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်၊ ကိုဝေမိုးနိုင် စတ္ထုနှစ် Eng မုံရွာတက္ကသိုလ်၊ ကိုပိုင်ရဲသူ တတိယနှစ် သင်္ချာ ဒဂုံတက္ကသိုလ်၊ ကိုမင်းလွင်ဦး B.E Mechanical ထားဝယ်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ကိုနန်းလင်း ဒုတိယနှစ် Physics ဒဂုံတက္ကသိုလ်၊ ကိုပြည်ဖြိုဒကျော် တတိယနှစ် Chemistry ပခုက္ကူတက္ကသိုလ်၊ ကိုချစ်ဝင်းမောင် စတ္ထုနှစ် Civil မကွေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ကိုသန့်ဇင်ထွန်း စတ္ထုနှစ် Civil ပြည်နည်းပညာတက္ကသိုလ် တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတူ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စုစုလွင်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖြိုးဇေယျာသော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိမ်းဆွေတို့ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
Credit to https://www.facebook.com/NLDParty
ဒီနေ့ စာမျက်နှာ ပေါ်မှာ တော်တော်များများ မျှထားတဲ့ သတင်း ဓာတ်ပုံလေး တွေ။
သတင်း ပုံ တစ်ခု က ဗိုလ်ကြီးအောင်ကျော်မြင့် ရဲ့ နာရေး သတင်း။
၂၉ နှစ် တိုက်ပွဲ မှာ ကျသွားတာ။
အဲဒီ နာရေး ကို သတင်းစာထဲ ထည့်ခွင့်မပေးဘူး လို့ ဆိုထားတယ်။
ဘုန်းကြီးဆွမ်းကပ် နေတဲ့ အိမ် ဆိုတာလေး က တကဲ့ နွမ်းပါးတဲ့ ပုံစံ လေး။
သူ့အပြင် နောက်က ရဲဘော် ဘယ်နှစ်ယောက်များ ကျ ခဲ့လဲတော့ မသိ။
နောက် တစ်ပုဒ် က ကချင် တိုက်ပွဲ မှာ ဒါဏ်ရာ နဲ့ ဆေးရုံတက်ရတာ ခွင့် မစေ့ခင် အိမ် ကို ရသလို အပြေးပြန်လာပြီး လမ်းစရိတ်ပြတ်လို့ မိုင် ၂၀ ကျော်ခရီး ကို လမ်းလျှောက်ပြန်ဖို့ လုပ်နေရတဲ့ ရဲဘော်လေး။
နောက်ပုံ က လမ်းဘေးမှာ ထမင်းစုစားနေတဲ့ ရဲဘော်လေး တွေ။
ဒီပုံ တွေ ကို ဒီရက် ဘယ်ဘက်က ဘယ်သူ တွေ ဖြန့်နေလဲ ဉာဏ်မမှီတော့။
အာဏာရူး နေ တဲ့ လူတစ်စု နဲ့ ရန်ငြိုးကြီး နေ တဲ့ တစ်ခြားတစ်စု ရဲ့ အတ္တ တိုက်ပွဲ တွေ ကြားမှာ
ဒီကျောင်းသား တွေ ကို ဒီ စစ်သားလေး တွေ နဲ့ တိုက်ပေး မဲ့ အခြေ ကို မမြင်ချင်ပါ။
အနည်းစု က လွဲ လို့ ကျန်သူအများ နွမ်းပါး နေလွန်း တဲ့ မြေမှာ
တူရာ လူ အချင်းချင်း ဖေးမ ပြီး လမ်းကောင်း ရောက်နိုင်ဖို့ အတွက် လုပ်ရမှာကို ကွယ်။
ဒီ ကျောင်းသားသပိတ်ကို စိတ်ထဲမှာ သိပ်ဘဝင်မကျပါ …
နောက်ကွယ်က ကိုယ်ယောင်ဖျောက်ထားတဲ့ လက်တွေကိုလည်း မြင်နေရတယ် …
လှုပ်ရှားမှုကို မူအားဖြင့်ထောက်ခံတယ် ၊ ဒါပေမယ့် တောင်းဆိုတာတွေက နိုင်ငံရေးပရောဂ ပါနေတယ်…
အဓိက ပညာရေးမြှင့်တင်ရေးနဲ့ ဘတ်ဂျတ်ကို ဇောင်းမပေး ၊ နိုင်ငံရေးအကွက်တွေ…
အခု အစိုးရက သဘောတူပါတယ်ဆိုတော့ ဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲ …
၈၈ တုန်းကလို “ရရင် ရ ၊ မရရင် ချ” ကနေ “ရရ မရရ ချ” လို့ တိုက်ကွက်ပြောင်းမှာလား…
ရပ်ရမည့်အချိန်မှာ မရပ်ရင် ပြောင်ဂျီးတို့ ဆွဲစားမည့်အကွက်ထဲ ဝင်သွားမယ်လို့ ဆိုလိုရင်းပါ…
ကွန်မြူနစ်စကား ငှါးပြောရရင်တော့ …. တပ်ဦးကျွံတယ်ပေါ့….
သပိတ်စုံ သူပုန်ထ အားလုံး ဝါးအစည်းပြေရင် စစ်တပ်ကလက်ခမောင်းခတ်မှာခင်ဗျ…
နိုင်ငံရေးသမားနဲ့ ဖွတ်ပြောင်အစိုးရ စစ်တုရင်ကစားပွဲမှာ ကျောင်းသားတွေ ပွန်းဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ…
ဒါပါဘဲ ကျောက်စ် ရယ်။
ကျွန်မ ဒီ စစ်အစိုးရ ကို မကြိုက်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ လောလောဆယ် သူတို့ အထဲ မှာ ကို လမ်းမှန်ရောက်ချင်သူ တွေ ရှိနေတာ မြင်နေရပြီ။
လက်ရှိ အစိုးရ အကြံပေး တွေ ထဲ က တစ်ချို့ ကို ကျွန်မ ယုံ တယ်။
သူတို့ လိုရာ ကို ဆွဲပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားနေတာ။
အာဏာလွှတ်လိုက်ရရင် ဆုံးရှုံးတော့ မဲ့ ရပိုင်ခွင့် တွေ အတွက် အသက်နဲ့ လဲ ပြီး စောင့်ရှောက်ချင်နေတဲ့ တစ်စု ကိုလဲ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။
ဝုန်းကနဲ ဘယ်ပေးရဲ မလဲ။
အခုဆို အစိုးရထဲ မှာ လဲ ပရို တွေ ပါနေပြီ။
လွှတ်တော် ထဲ လဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဝင်နေနိုင်ပြီ။
သူတို့ ပေါင်းပြီး အကောင်းဆုံး ကြိုးစား သွားမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
အဲဒါ ကို ပတ်မကြီး အဖောက်ခံ ရရင်တော့
ဒီ မှာ စနစ်တကျ ပရိုဂရမ်ချ ရေးလို့မှမရတာလေ။
ဘေးမှာ ကဖျက် ယဖျက် စိတ်မမှန် သူ တွေ ဝိုင်း နေတာလဲ အသိကို။
တောကြောင်တော့ ဘယ်နေတယ်မသိ အူးကြောင်တော့ လက်ခမောင်းခတ်နေပါလား
နှစ်ပေါင်း၅၀ ကျော် ၆၀ လောက်ပျက်စီးနေတာကို
၅ နှစ်းအတွင်း အကောင်းအတိုင်းပြန်ဖြစ်ချင်လို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ